Hevitra fohy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Ny maha reny dia iray amin'ireo asa lehibe indrindra amin'ny famoronan'Andriamanitra. Niverina tamiko izany rehefa nanontany tena aho vao haingana hoe inona no homena ny vadiko sy ny rafozako ho an'ny Fetin'ny Reny. Tadidiko tamim-pitiavana ny zavatra nolazain'ny reniko rehefa nilaza tamiko sy ny rahavaviko izy fa faly izy lasa reninay. Ny niterahany antsika dia nahatonga azy hahatakatra ny fitiavana sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra amin'ny fomba vaovao tanteraka. Azoko natao ny nanomboka nahatakatra fa rehefa teraka ny zanakay. Mbola tadidiko ny fahagagana nataoko rehefa nivadika fifaliana mahavariana ny fanaintainan'ny vadiko, Tammy ...
Ny Fanasan’ny Tompo dia mampahatsiahy ny zavatra nataon’i Jesosy tamin’ny lasa, famantarana ny fifandraisantsika aminy ankehitriny, ary fampanantenana ny amin’izay hataony amin’ny hoavy. Isaky ny mankalaza ny fanasan’ny Tompo isika dia mandray mofo sy divay ho fahatsiarovana ny Mpamonjy antsika sy hanambara ny fahafatesany mandra-pihaviny. Ny Fanasan’ny Tompo dia mandray anjara amin’ny fahafatesan’ny Tompontsika sy ny nitsanganany tamin’ny maty, izay nanolotra ny vatany sy nandatsaka ny rany mba hahazoantsika famelan-keloka. (1. Korintiana 11,23- enina ambin'ny folo; 10,16; Matio 26,26-28) Ny Fanasan’ny Tompo dia mampahatsiahy antsika ny fahafatesan’i Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana Ny harivan’ny namadihana Azy raha niara-nisakafo tamin’ny mpianany i Jesoa...
Rehefa nipetraka tamim-pahanginana tao amin'ny kilasy foana ny Forresters, dia hoy i Doris tamin'izy ireo: "Jeremy dia ao amin'ny sekoly manokana. Tsy rariny ho azy ny miaraka amin'ny ankizy hafa tsy manana olana amin'ny fianarana. "
Ramatoa Forrester dia nitomany moramora rehefa nilaza ny vadiny hoe: “Ramatoa Miller,” hoy izy, “dia hatairana izaitsizy tokoa i Jeremy raha tsy maintsy esorintsika any am-pianarana izy. Fantatray fa tena mahafinaritra azy ny eto. "
Nipetraka tao i Doris fotoana ela taorian'ny nialan'ny ray aman-dreniny, nitazana teo am-baravarankely tamin'ny lanezy izy. Tsy rariny ny fananana an'i Jeremy tao amin'ny kilasiny ...
Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia namorona fitsapana betsaka handrefesana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fanjohian-kevitra momba ny fitondran-tena. Nofintininy fa ny fitondran-tena tsara, hisorohana ny sazy, no endrika mandrisika indrindra hanao izay mahitsy. Manova ny fitondrantenantsika fotsiny ve isika mba hialana amin'ny famaizana?
Tahaka izany ve ny fibebahana kristiana? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ny fomba maro hanatsarana fivoarana ara-pitondrantena? Kristiana maro no manana fironana hino fa ny fahamasinana dia mitovy amin'ny tsy fahotana. Na dia tsy diso tanteraka aza izany dia misy lesoka lehibe iray amin'io fomba fijery io. Ny fahamasinana dia tsy tsy fisian'ny zavatra, ota. Fahamasinana ny fisian'ny zavatra lehibe kokoa, izany hoe ny fandraisana anjara amin'ny fiainan'Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azo atao ny manasa ny fahotantsika rehetra, ary na dia mahomby amin'ny fanaovana izany aza isika (ary "raha" lehibe izany satria tsy nisy olon-kafa afa-tsy i Jesosy no nanao izany), dia mbola tsy azontsika tena fiainana kristiana.
Ny fibebahana marina dia tsy tafiditra amin'ny fialana amin'ny zavatra iray, fa amin'ny fitodihana any amin'Andriamanitra, izay tia antsika ary manolo-tena mandrakizay hitondra ny fahafenoana sy fifaliana ary fitiavana ny fiainana telo izay an'ny Ray sy ny Zanaka ary hizara ny Masina Fanahy. Ny fitodihana amin'Andriamanitra dia toy ny manokatra ny masontsika amin'ny alàlan'ny famohana ny jiro ...